संक्रमित शिवहरि पौड्यालको स्वास्थ्य विग्रिए पछि आइसियुमा राखेर उपचार सुरु – Classic Khabar
संक्रमित शिवहरि पौड्यालको स्वास्थ्य विग्रिए पछि आइसियुमा राखेर उपचार सुरु
May 14, 2021 494
अभिनेता एवं निर्देशक शिवहरि पौड्याललाई पनि भाइरस पुष्टि भएको छ । घरमै आइसोलेसनमा रहेका पौडेलको स्वास्थ्यमा समस्या सुरु भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको छ । उनलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि उनलाई अस्पताल लगेर आइसियुमा भर्ना गरिएको हो ,
राजधानीको नैकापस्थित एपीएफ अस्पतालको आइसियुमा उनको उपचार भैरहेको परिवारका सदस्यले जनाएका छन् । अहिले उनलाई आइसीयूमा राखेर अक्सिजनको सहयोगमा उपचार गरिएको छ ।
महामारी फैलिएपछि नेपालका थुप्रै कलाकार संक्रमित भएका छन् । केही दिन अघि मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई भाइरस पुष्टि भएको थियो । ८ दिन अस्पताल बसेर घर फर्केका श्रेष्ठलाई घर पुग्नासाथ फेरी स्वास्थयमा समस्या देखिएपछि दोस्रो पटक अस्पताल भर्ना गरिएको छ । उनलाई अझै घर ल्याइएको जानकारी आएको छैन ।
सम्भवत उनी अझै अस्पतालमै छन् । त्यस्तै कलाकार नरेन्द्र महर्जन, रविन्द्र खड्का, सरिता लामिछाने, ऋषि लामिछाने, वर्षा राउत, शिल्पा मास्के पनि आइसोलेसनमा छन् । उनीहरुलाई पनि भाइरस पुष्टि भएको हो । कलाकार केकी अधिकारी र प्रकाश सपुतको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको बताइएको छ ।
Prevआज ३१ गतेका मुख्य समाचार | केपि फेरि प्रधानमन्त्री बने, रबिको गाडी रोकियो, सबै बैंक बन्द
Nextप्रधानमन्त्री बन्न नपाएपछि नक्कली शेरबहादुर देउवा रिसाए! भने- सबलाई कुकुर लाउन सकेन भने त के भन्ने? तात्तो न छारोको के आश मात्रै देखाउँछन् ।’(भिडियो)
पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीको ११ किलो सुन कता हरायो ?
सधैंका लागि छोडेर गयौ बिनिता ,तिमी बिदेशबाट फर्केपछी भेट्ने भन्दा भन्दै एती धेरै दुर भयौ
आमाबुवालाई कर्णालीले बगायो, २० दिनदेखि मृत्युसँग लड्दैछिन् सावित्री